Vidin’ny PPN: antony maro ny fiakaran’ny vidim-bary | NewsMada
Vidin’ny PPN: antony maro ny fiakaran’ny vidim-bary
Nitondra fanazavana, omaly, ny minisitry ny Indostria, ny varotra, ny asa tanana (Mica), Rakotomalala Lantosoa, momba ny fiakaran’ny vidim-bary sy ny PPN amin’ny ankapobeny. Nambaran’ny minisitra fa efa miditra amin’ny vanim-potoana maitsoahitra isika izao, efa lany koa vokatra eto an-toerana. Raha jerena, miakatra 50 Ar ny kapoakam-bary, salanisa, fa indrindra miankina amin’ny antony maro samihafa ny vidin’entana ilaina andavanandro.
« Marina fa mitotongana 10 % ny sandam-bola Ariary fa miezaka ny fanjakana amin’ny fifampiresahana amin’ireo mpandraharaha mifehy izany. Ny menaka, ohatra, hafarana 100 % nefa tsy miakatra ny vidiny. 10 % ihany ny vary hafarantsika, ary manana politika momba izany ny fanjakana. Mihena ny hafarantsika amin’ity taona ity, manodidina ny 240 000 t raha 285 000 t tamin’ny taon-dasa », hoy ny minisitra. “Misy ny ezaka ataon’ny minisiteran’ny Fambolena”, hoy ihany izy.
Ohatra nambaran’ny minisitra Rakotomalala Lantosoa ny vidin’entana any amin’ny faritra Androy sy Anosy, miditra ao amin’ny seranan-tsambon’i Ehoala. Mpandraharaha dimy monja ny mamatsy ireo faritra ireo, ampahany be indrindra 75 % ho an’ny faritra Anosy. Olana ny faharatsian’ny lalana, ny fahalaviran’ny toerana … Miteraka masonkarena hafa tafiditra ao amin’ny vidin’entana ireny rehetra ireny. Ny mpivarotra koa, amin’ny maha mpivarotra azy, tsy maintsy maka tombony.
Na izany aza, manara-maso ny minisitera mpiahy (Mica), ny mpitandro filaminana sy ireo tompo’andraikitra any an-toerana, satria misy ihany ny mpanararaotra mampiakatra ny vidin’entana, mitahiry tsy mamoaka ny tokony hamidy, na koa mivarotra entana efa lany andro tsy araka ny fahasalamana. Ao koa ireo mpivarotra tsy mametraka vidin’entana, voararan’ny lalàna. Mila hajaina ny zon’ny mpanjifa.
Manamarina ireo rehetra ireo fa mifampiankina ny fambolena, ny fiompiana sy ny indostria (Zahao lahatsoratra eo ambony). Tanjona amin’izany ny hisian’ny fahavitantena sakafo, hampihena araka izay tratra ny fanafarana entana avy any ivelany. Manjifa ny vita malagasy.